के हो बिहिबार राति नेपालको आकाशमा देखिएको चम्किलो वस्तु ? यस्तो छ वास्तविकता – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/के हो बिहिबार राति नेपालको आकाशमा देखिएको चम्किलो वस्तु ? यस्तो छ वास्तविकता
74,757 1 minute read
पाल्पा स्याङ्गजा लगायतका प्रत्यक्षदर्शीकाअनुसार केहि सेकेन्ड मात्र आकाशमा चम्किलो बस्तु देखिएको र यसले निकै उज्यालो बनाएको थियो। यता बाग्लुङ आसपासक स्थानीयहरुले ठुलो आवाज सहित आकाशमा चम्किलो बस्तु देखेको बताएका छन् । त्यस्तै गुल्मीका एक स्थानियले पनि अर्घाखाँचीतर्फ ज्वाला जस्तो बस्तु आवाज निकाल्दै गएको बताएका छन्। बिभिन्न ठाउँका व्यक्तिहरुले लिएको तस्विरहरु अहिले सामाजिक संजालमा साझा भईरहेका छन्।
नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाईटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले आज बिशेषगरि गण्डकी प्रदेश क्षेत्रमा देखिएको चम्किलो बस्तु यहि हो भन्न नसकिने बताएका छन्। प्राप्त जानकारी तथा केहि प्रत्यक्षदर्शीसँगबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त बस्तु उल्कापिण्ड हुन् सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले बिजपाटीलाई बताए।
‘पाल्पाका मान्छेले उज्यालो चम्किलो बस्तु देखेको भन्नु र बाग्लुङका मान्छेले आवाज सहित चम्किलो बस्तु देखेको बताएका छन, यसलाई आधार मान्दा अहिलेसम्मलाई यो उल्का पिण्ड भएको र यो गण्डक प्रदेश क्षेत्र वा त्यस आसपासमा खसेको अनुमान गर्न सकिन्छ तर यहि नै हो भन्ने ठोकुवा गर्न अहिलेनै मिल्दैन’ उनले भने ।
WHO सँग मिलेर सरकारले नै कोरोनाको नाममा अपराध र प्रोपोगान्डा गरेको छ :शिक्षाविद् कर्ण बहादुर शाही (भिडियो सहित)